အေသင် ****ဒီတိုက်ပွဲဟာ ငါတို့ရဲ့ အဆုံးသတ်အောင်ပွဲ****: ကုန်ဈေး နုန်း တိုတ်ပွဲ နေပြည်တော်ကို ဦးတည်
အေသင် ****ဒီတိုက်ပွဲဟာ ငါတို့ရဲ့ အဆုံးသတ်အောင်ပွဲ****
အမိမြေနဲ့ ဧရာဝတီမြစ် နယ်ချဲ့ ကွန်မြုနစ်တရုတ် ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ရေး ။တမျိုးသားလုံး စည်းရုံးကျ။ ကိုယ်သမိုင်း ကိုယ်ရေး။ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းတိုးတတ်ေ၇း နိုင်ငံတကာ နဲ့ယှဉ်ဘောင်းတန်းနိုင်အောင်း မိမိတို့ ရောက်တဲ့ နေရာကနေ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုး ထမ်းဆောင်းပံပိုးခြင်း ။ ထောက်ခံကူညီအားပေး ခြင်း ။တိုင်းပြည် အခက်အခဲဘက်ဘောင်းပုံစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန် ပြည်သူရွှေချ တဲ့ အစိုးရ နဲ့အတူ တိုင်းရင်းသား ညီအကိုယ်အပေါင်းတို့ အခက်အခဲတွေ ကြားကအတူ ရုန်းထွက် ကျပါစို့ ။
ကုန်ဈေး နုန်း တိုတ်ပွဲ နေပြည်တော်ကို ဦးတည်
ကိုမင်ကိုနိုင် နှင့် ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်ဆောင်များ ချီတတ်တောင်ဆိုနေပုံ ၂၀၀၇
ရန်ကုန်တိုင်းတပ် လက်အောက်ခံ တောင် ဥက္ကလာ ခမရ ( ၄၃၅) (၄၃၆) တပ်ရင်း ရဲဘော်မိသားစုဝင်များနှုင့် ကျောင်းသား ကျောင်သူ အင်အား ၂၀၀ ကျော်လောက် ဟာ ဆန္ဒ ပြ ပြီး ၄င်းတို၏ လက်ရှိ အထွေထွေ ကြပ်တဲ့ မှု စားဝတ်နေရေး မပြေလည်မှု အား နေ ပြည်တော်ရှိအထက် လူကြီးများ များ ဖြစ်သော် ဗိုလ်ချုပ်မှူကြီး များ
သိရှိရန် နှင့် စားဝတ်ရေးပြသာနာအား အမြန်ဆုံး ပြေလည် အောင် တပ်မတော်သားမိသာစု မှ ကျောင်းသား။ကျောင်းသူ များ မှာ ပညာရေးပါ အခက်အခဲများဖြစ်လာပြီး မိသားစုအကြတ်အတဲများ များစွာ ရင်ဆိုင်နေ ခြင်းကို ။ ယနေ့ နံနက်တန်းစီရာ တပ်ရင်းမှုး ရုံး အရှေတွင် တပ်မိသားစုနှင့် ကျောင်းသားကျောင်း ဆန္ဒ ပြ တောင်ဆိုကြောင်းသတင်းရ ရှိ။
၂၀၀ရ ရွှေဝါရောင် ရေးအခင်းမဖြစ်မှီ ကုန်ဈေးနှူန်မြင့်တင် မှု လောင်စားဆီး ဈေးနှူံးများ မြင်တတ်ကာ အစစအရာရာ ဈေးတတ်မှူ ပြည်သူများအနေဖြင့် ခက်ခဲစွာရင်ဆိုင်နေရပြီး ။ ပြသာနာများ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးရန် အထက်မှ အာဏာပိုင်များ သိရှိ၇န် မှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြ တောင်ဆို မတရား ဖမ်းဆီး ထောင် ဒဏ် တသက် တကျွှန် ချခံနေရပြီး ။ ဝေလံသော်ထောင်တွင် အပိုခံနေရသည်။
ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောခဲ့သော်စကား ( မိဘပြည်သူတွေ ယနေအချိန် စားဝတ်နေရေးအကြပ်အတဲ ဘက်ပေါင်းစုံ ရင်ဆိုင်နေရတယ် ဒါကို ကျွန်တော်တို့ လက်လူရှု ထားလိုမရဘူး ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်သား လူငယ် တွေ အနေနဲ့မှန်ကန်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်ဆိုတင်ပြ သွားပါမည်။
ကုန်ဈေးနုန်း ဦးဆောင် ရဲဘော်ကြီး ကိုထင်ကျော် ပြောခဲ့ စကား လက်ထဲက စားရမဲ့ ထမင်းတလုပ် ပုတ်ချ ခံနေရပြီး ဒါကို ကျွှန်တော်တို့ ...........ငြိမ်ခံနေလို မရတော့ဘူး။
Posted by အေသင် at 12:53 AM
Labels: ပြည်တွင်း လှုပ်ရှားမှုသတင်း
ရာဇ၀င်တွေ နဲ့တင်ကျန်နေ အမိ နိုင်ငံ ပုဂံ ရဲ့ သဘာဝအလှ
လူမျိုးဘာသာ သာသနာ ကို ကယ်တင် စောင့် ရှောက်ကျ
အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက်သက်စွန့် သွားတဲ့
တိုင်းပြည်လွှတ်မြောက်ရေးမိန့် ခွန်း (ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ)
၁။ “ရဲလျှင်ကြံ၊ ကြောက်လျှင်ပြန်၊
ဖိနိမ်မှုများကြားမှ ရာဇ၀င်တွင် သံဃာလှုပ်ရှားမူ
နိုင်ငံတကာ အကြီးမားဆုံးလုပ်ရှားမှူ သမိုင်းဝင်
ဆုံးရုံးနေတဲ့ ကလေး အခွင့်အရေး
လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း
ငြိမ်းချမ်းရေး ခေါင်းဆောင် အောင်ဆန်းစုကြည်
ဧရာဝတီ မြစ်ရဲ ရာဇာဝင် ကျွနုပ်တို့ယုံကြည်ချက် နဲ့လှုပ်ရှားမူစတင်
ဧရာဝတီ ကယ်တင်ရေး အမိမြေလွှတ်မြောက်ရေး
ငါတို့အားလုံးရဲ ခေါင်းဆောင်း မင်းကိုနိင်
88 အေသင် face book link
ပြည်သူဖက် က ရပ်တည်နေတဲ့ ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးဇင်
ပြည်သူဖက်က ရပ်တည်နေတဲ့ ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးဇင်
်facebook မှ လာသော အရေး ပေါ်ဆက်သွယ်ရန်သတင်း
face book မှ လာသော အရေး ပေါ်ဆက်သွယ်ရန်သတင်း DVB entertainment သားလေးမောင်ထိပ်ကွက်လေးကို ကူညီချင်ရင် ဟင်္သာတက ဆရာတော် အရှင် ဥာဏာလင်္ကာရ (+၉၅ ၉...
ကချင် ဒေသ စစ်ပွဲ တွေ ဖြစ်ပွဲနေဆဲ
အစိုးရနဲ့ KIO နေ့စဉ် ပစ်ခတ်မှု ရှိနေဆဲ 2011-07-09 အစိုးရတပ်တွေနဲ့ KIO တပ်တွေ ယာယီ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စတင် စကားပြောဆိုနေတယ် ဆိုပေမယ့် နေ့စဉ် တ...
အမေရိကန် လျိုဝှတ်ချက် သတင်း မှ အာဏာရှင် တို့ပြည်ပတွင် ရပ်တည်နေမှု ကို သတင်းရရှိ
စင်္ကာပူတက္ကသိုလ်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးများကို ဥရောပနှင့် သြစတေးလျှ ဗီဇာများရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးမှု (ပုံမှာတွေ့ ရတာရေချယ် တေဇ ဖြစ်ပါတယ...
ရန်သူလေယာဉ်အား အထက်အမိန့် အရ KIA ပစ်ခေတ်
Comments (0) နယ်ကျွံလာသော စစ်အစိုးရ ရဟတ်ယာဉ်ကို KIO သတိပေး ပစ်ခတ် သန်းထိုက်ဦး Friday, September 24, 2...
နိုဘယ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့သမီး နိုဘယ်လ်အေး( ၈၈မျိုးဆက်)
မနှင်းမေအောင် မုံရွာထောင်မှာ တိုက်ပိတ်ခံနေရ 2011-07-12 ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မရှိဘူးလို့ ပြောဆိုတာ...
ပြည်သူချစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သမီး အောင်ဆန်းစုကြည်,
ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်းသမိး တိုင်ပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် အမေစု ထိုင် နိုင်ငံ မဟာချိုင် အလုပ်သမားကြမ်းသမားများ ကြိုဆို အလုပ...
ဗိုလ်ချုပ် ဓါတ်ပုံ မြေ မကျအောင် ကိုင်ရင်း သူရဲကောင်း ၀င်မော်ဦး
The Lady ရုပ်ရှင် ထိုင်း​နိုင်ငံတွင် ရုံတင်ပြီ
The Lady ရုပ်ရှင် ထိုင်း​နိုင်ငံတွင် ရုံတင်ပြီ Published on February 2, 2012 by မန်းစိုင်းမွန် · No Comments ...
သျှမ်း​သံ​တော်ဆင့်​သတင်း​စဉ် လက်​ထောက်အယ်ဒီတာ ကွယ်လွန် Published on September 15, 2011 by webteam · No Comments ...
မတရာ တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကို လူမဆန် စွာလုပ် ရပ်တွေ ရပ်တန့် စေဖို တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က တိုက်ပွဲဝင်ကျပါ
ရိုက်နှက်ညှဉ်း​ပန်း​ခံခဲ့​ရသည့်​ ​မောင်ထိပ်ကွက်နှင့်​ ​မေး​မြန်း​ခန်း​ Published on July 7, 2011 by နော်နိုရင်း ·3Comments ...
ဧရာဝတီ မြစ်ထာဝရရှင်သန်ဖို့ အတွက် သင့်လက်မှတ် ထိုးပြီး ကယ်တင်ပါ ။။။
အခြေအနေနှုင့်အချိန်အခါလိုက်ဘ၀ဟာတိုက်ပွဲတခု အကျိုးရှိသော လုပ်ရပ်တွေနဲ ခေတ်မှီနည်ပညာနဲပေါင်းစပ်ပြီး အမိမြေလွှတ်မြောက်ရေးအတွက်ရည်ရွှယ်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ တိုက်ပွဲဝင်ရန်ဖြစ်တယ်၊ ဆက်သွယ်ရန် atheinmoe88@gmail.com
88 Twitter news အမိမြေ ဧရာဝတီမြစ် အသက်ရှင်သန့် ရေ ကွန်မြုနစ် တရုတ်ဝါဒ ကိုပြတ်သားစွာ ဆန့် ကျင်ရမယ်။
ကြံ့ဖွတ် အာဏာ ပိုင်များ တပ်မ (၇၇) ကိုစတင်တိုက်ခို...
ရဲဘော်တို့မိမိတို အနေဖြင် အောက်ပါ စီးပွားရေး သမာ...
တပ်မတော်နှင့် ကျွှနုပ်တို ပူပေါင်းနေပြီး
ရွေးကောက်ပွဲ ကို ထောက်ခံသော် နအဖ စစ်တပ် အား KNU တပ...
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံခေါ်ရေး ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများေ...
ရွေကောက်ပွဲ ကို လက်မခံတဲ့ ခလရ (၁၈) နှင့် ကြံ့ဖွတ် ...
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူရေး ခေါင်းဆောင်များပြင်ဆင်...
စောဘဦးကြီး မူလေးချက်ကို ကားပါမစ်နဲ့ လဲစားလိုက်ခြင...
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ဖို့ NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသားေ...
ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ဖို့ အတိုက်အခံ အင်အားစ...
ရန်သူမှ ရှမ်မြောက် ကို စစ်ဆင်ရေးတိုးမြင့်
နအဖစစ်အုပ်စု ဗကပ တပ်ဖွဲ ဟောင် UWSA ဒေသမှ မူယစ်ဆေ...
တပ်မ (၂၂) မှ ရဲဘော်များ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန် လမ်းစဉ်...
ခလရ (၅၅) မှ တပ်မတော်သားများ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ...
၇န်သူမှ မိုးညှင်း နှင့် ဟိုပင်မြို့ ရှိ KIO ရုံး ...
မြိုင်ကြီးငူဘုန်ကြီး ပြသာနာ ရွာမဟုတ်ဘူ မြ၀တီမြို...
ရဲ့မွန်တပ် ကကကြီးညွှန်ကြားချက်ကိုဆန့် ကျင်
ငါတို့ အားလုံးရဲ့ ကျောင်းသားခေါင်ဆောင် ကိုမင်းကိ...
တပ်မတော်သားများ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...
မီဒီယာ WAR ကို စတင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး ကချင်တပ် နှင့်...
အိမ်ရှေမှာ တံခါး ကို ဖွဖွခေါက်ကာ လမိုက်ည ရဲ့ အို့ ...
ရန်သူထိုးစစ် ၇ှမ်မြောက်ကို စတင်ရင် UWSA မှစစ်ကူေ...
စစ်ရေး ဆိုတာ မိုက်တဲ့ လူ ဗိုလ် မ လုပ် ဘူး ။ ဦး ...
ရန်သူ ခလရ ၃၂ အား KNU တပ်ဖွဲ့ များရဲ စီးနှင် တ...
UWSA မူယစ်ဆေးဝါအဖွဲမှ စစ်ဆင်ရေးသည် ရန်သူ ရဲ့ အဓိ...
ရန်သူမှ ရှမ်မြောက်တွင် uwsa အား ဖြတ်လေးဖြတ်စတင် နေ...
စစ်အုပ်စု ရဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံဖိနှပ်မှု ကြားက KIO အ...
တမျိုးသားလုံးလွတ်မြောက်ရေး အတွတ် တရုတ် မူယစ်ဆေးဝါး...
၀သပနှင့် ထိုက်တိုတ် ရင်ဆိုင်ထားသော် တိုင်းတပ်မ ထော...
ရွှေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မြောက် ရေးအတွတ် ထောင်သားများအားသု...
ယူနမ်မှ တရုတ်လူမျိုးများ နေပြည်တော်နှင့်ပေါင်းပြီ...
ရှေ့တန်းစခန်းမှ တာဝန်ကျ KIA အရာခံဗိုလ်အား ရန်သူတပ...
KNPP တပ်ဖွဲ့ နှင့် နအဖ တပ်ဖွဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်
နေပြည်တော် ဗိုလ်ချုပ်များမှ ညွှန်ကြားချက် တရုတ်လူမ...
တချိန်က လက်နက်ကိုင်တာ အမျိုးသားရေး လို့ ပြော အခု...
မရိုးသားသော် စည်းရုံးရေးလုပ် ငန်များ နေပြည်တော် ညွှ...
စစ်အုပ်စု ဆက်လက်တည်မြဲ ရေးအတွတ် ရာထူးအာဏာများပြောင...
ဗိုလ်ချုပ်မှု ကြီး သန်းရွှေ တရုတ်က ပြန်လာပြီး တ...
ကြံ့ ဖွတ်ပြီးရင် ဘိန်စားတရုတ် နဲ့ မင်တို့ အလှည်ပဲ...
၀ါးပြီး ရင်းဝါးထား ကြံဖွတ် ပြီးရင် မင်းတို့ အလှည...
တမျိုးသားလုံး သားလုံးလွှတ်မြောက်ရေးအတွတ် နေပြည်တော်...
စစ်မြေပြင်နဲ့တိုက်ပွဲတွေ ထဲမှာ ငါဘ၀ ငါရဲ ဘော်ေ...
KNU ပျောက်ကျားစစ်ဆင်းရေးနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေ
88 မျိုးဆက် အမြန်သတင်းများ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်
အဖေ သမီး အဖေအတိုင်း မိဘပြည်သူတွေ နေရာတိုင်းမှာ မေတ္တာ ထားတယ်
အဖေ သမီး အဖေအတိုင်း မိဘပြည်သူတွေ နေရာတိုင်းမှာ မေတ္တာ ထားတယ် သတင်း ဗွီအိုအေ
နေပြည်တော် စီမံချက် ဖြင့် ကြည်ရေလေ တပ်ပေါင်းစု အချိန်မြင့်လုပ်ဆောင်နေ
မြန်မာပြည်မှာ ရေငုပ်သင်္ဘော ဆောက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိနေပြီလား အေးချမ်းမြေ့ Tuesday, 05 July 2011 14:37 ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ် မြောက်ရေး ဗမာ့တပ်မတော်သားအများအပြားထောက်ခံကြိုဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွတ် ။ရန်ကုန်တိုင်း တပ် ။မကွေးတိုင်း တပ်မ(၇၇) တပ်မ ရဲဘော်များ ရဲမွန်းတပ် တပ်ရင်း (၈) မှ အရာရှိများ အကြပ်တပ်...
ိ ကိုးကန့်အဖွဲ့ နအဖစစ်တပ် ဥက္ကဌဖုန်ကြားရှင်း နှင့်အဖွဲ့ သတ်မှတ်ထားသည့် နယ်မြေအတွင်း စစ်အစိုးရတပ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သွား...
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ကိုယ် ချစ်ခင်လေးစား အဖေ သမီး အောင်ဆန်းစုကြည်
အကျဉ်းကျ တိုင်းရင်းသားခေါင်း ဆောင်လွတ်မြောက်ရေး ဦးစားပေး စဉ်းစားနေဟု ဒေါ်စုပြော	Wednesday, 17 November 2010 14:53...
ဆလိုင်း တင်မောင်ဦး သို့ အောက်ချင်းဌက် ရာဇာဝင်
Salai Tin Mg Oo ...
ဧ”ရာဝတီ မြစ်နဲ့ မြစ်ဆုံ ရဲ့မြို့ ပြတိုက်ပွဲ
ပျဉ်း​မနား​မြို့ ​တွင် ဗုံး​တွေ့​ Published on October 4, 2011 by ​အေး​နိုင် · No Comments ...
သံချက် ၈၈ မျိုးဆက် ကိုကိုကြီး အမြင် ပြည်သူရှင်းလင်း ပြ
88 မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး မဟာ အတာသင်္ကြန် အပေါ သံချပ် အရေးကြီးပုံ နဲ့အနပညာ ပါသော နိင်ငံရေးဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြ
၈၈မျိုးဆက် အေသင်. Picture Window theme. Powered by Blogger.